यी ५ कारणले गर्दा प्रचण्ड पछि हट्न बाध्य भए!नेकपाको विवाद प्रचण्ड पछि हट्नुको कारणले गर्दा मत्थर भएको छ…हेर्नुहोस! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
यी ५ कारणले गर्दा प्रचण्ड पछि हट्न बाध्य भए!नेकपाको विवाद प्रचण्ड पछि हट्नुको कारणले गर्दा मत्थर भएको छ…हेर्नुहोस!
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा पछिल्लो समय उत्कर्षमा पुगेको वि वाद अहिले म,त्थर देखिएको छ। १० असारबाट शुरू सत्ताधारी नेकपाको स्थायी कमिटी बै,ठकबाट पार्टी तथा सरकार दुवैको ने,तृत्वमा रहेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रा,जीनामा माग गर्ने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सहितका नेताहरू अहिले संयमित देखिएका छन्।
मौसम सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोको वि,पद आइलाग्दा ४४ जनाले जीवन गुमाइसकेका छन्। कैयौं बेपत्ता छन्। सयौं घरमा क्ष,ति पुगेको छ भने थप सयौं परिवार घरवारवि,हिन भएका छन्। देशलाई प्राकृतिक वि,पदले गाँजेका बेला उद्धार र रा,हतमा केन्द्रित हुन भन्दै साउन २ गतेसम्मको लागि स्थायी कमिटी को बैठक स्थगित गरिएको छ। केही दिन अघिसम्म दुई अध्यक्षबीचको उत्कर्षमा पुगेको द्वन्द्व अहिले म,त्थर हुँदै गएको जस्तो देखिदैछ। केहीले यसलाई प्रचण्ड पछि हटेको रूपमा अर्थ्याएका छन्।
के प्रचण्ड पछि हटेका हुन् त ? एक स्थायी कमिटी सदस्य (पूर्व माओवादी) भन्छन्, होइन। अघि बढ्न नसकेका हुन्। रा,जनीतिमा अघि बढ्न सकिएन भने आफैं पछि हटिन्छ। एक :ठाडो र तेर्सो संवाद:प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीचको बैठकको शुरूआत कसरी हुन्छ ? बैठकमा प्रायः सँगै हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यलाई हामीले सोध्यौं। निकै बेर हाँसेर उनले भने, कहिले ठाडो गरि। कहिले तेर्सो गरि।के हो ठाडो र तेर्सो भनेको ? प्रधानमन्त्रीले रा,जीनामा गर्नुपर्ने प्रसंगबाट कुराकानी शुरू भयो भने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट जवाफ हुन्छ, ‘हुन्न।’ यसलाई उनले ठाडोको रूपमा अर्थ्याए। “कुनै बैठक देशको वि,विध परिस्थितिबाट शुरू हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई सम्झाएको शैलीमा कुरा गर्नुहुन्छ, यसलाई मैले तेर्सो भन्ने गरेको छु। ठाडो र तेर्सो दुवैमा प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा म्यासेज पाउनुभएको छ, उनी भन्छन्, प्रधानमन्त्रीले दुबै पदबाट रा,जीनामा गर्नुहुन्न।
दुई :प्रचण्डले जो,खिम बुझे:प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गरेर दल र सरकार क,ब्जा गर्ने र,णनीतिमा लाग्दा प्रचण्डले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा बामदेव गौतमलगायतको साथ पाएका छन्। खासमा यिनै नेताहरूको साथका का,रण प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीवि,रुद्ध यति खुलेर प्रस्तुत हुने आँट गरेका हुन्।तर, एकातिर प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशन गरेपछि पार्टीको तथा आम निर्वाचन गरेर सरकारको ने,तृत्व ह,स्तान्तरण गर्ने प्रष्ट पारिसकेका छन्। अर्कोतिर अहिले आफूसँग उभिएका नेताहरूको आ-आफ्नै उद्देश्य छन्। आफैसँग अहिले उभिएका नेताहरूका उद्देश्य भविष्यमा आफ्ना लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने जो,खिम प्रचण्डले बुझेका हुन सक्छन्।
तीन :दुई विकल्प :प्रचण्डसामु दुई विकल्प छन्। पहिलो, बहुमतको आडमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार गिराउने र आफ्नो ने,तृत्वमा सरकार बनाउने, त्यो पनि कांग्रेस, समाजवादी लगायतका बाँकी पार्टीसँग मिलेर। दोस्रो, पार्टीको महाधिवेशनसम्म धैर्य गर्ने र सिंगो पार्टीको एकल अध्यक्ष बन्ने। अनि, दरिलो पार्टीलाई लिएर चुनावमा होमिने र चुनाव जितेर बलियो प्रधानमन्त्री बन्ने। तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न गठबन्धन सरकारका बन्धन, बाध्यता र जो,खिम मोल्ने कि धैर्य गर्ने ? सायद प्रचण्डले दोस्रो बाटो रोज्दैछन्।
चार :पार्टी फु,ट्ने र अस्तित्व समाप्त हुने डर:धोविघाटको चर्चित अगेनो बैठकमा नेताहरू आउने क्रम जारी थियो। प्रचण्ड दुईवटै हात खल्तीभित्र राखेर बसेका थिए।
उनीनिकट मानिएका एक सदस्यले हाँसी हाँसी मजाकमै सोधे, दुवै खल्ती खाली होला है कमरेड।”प्रचण्डले फिस्स हाँसेर कुरा टारे। त्यही बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदबाट रा,जीनामा गर्न बाध्य पार्ने सहमति गर्‍यो। त्यसको पर्सिपल्ट स्थायी कमिटीका तिनै सदस्यहरू प्रचण्डलाई भेट्न गए। उनीहरूले स्पष्ट रूपमा प्रचण्डलाई भने, पार्टी फुट्यो भने हामी तपाईंको साथमा हुने छैनौं।
पछिल्लो दिनमा टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतका नेता प्रचण्डसँग टाढिएकै थिए। तर, अगेनोको बैठक यता भने हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, रामबहादुर थापा लगायतका प्रभावशाली नेताले समेत पार्टी फुटे सँगै नहुने स्पष्ट सन्देश प्रचण्डलाई दिइसकेका छन्। वर्षमान पुन जस्ता प्रचण्डका खम्बा मानिने नेताहरू समेत आजकाल बीचमा बसेर कुरा गर्न थालेका छन्।
पूर्वमाओवादीकै नेताबाट यस्तो कुरा आएपछि पार्टी नै फुट्ने अवस्थामा पूर्वएमाले पंक्तिबाट व्यापक सहयोग मिल्ने त उनी कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्, सायद। फेरि पार्टी फुटेको दिनमा त जन्मिने अर्को एमाले हो। त्यसले बोक्ने सेन्टिमेण्ट र पार्टीका नेताको अभिव्यक्तिले फुटेको दिनमा आफ्नो स्थिति मूल्यांकन गर्न प्रचण्डलाई सहयोग गरेको छ।
पाँच :टीम र देशको परिरिस्थति:एक मन्त्रीले गएको चुनावको कुरा सम्झिए, “पार्टी एकता गर्नेगरि हामी तालमेल गरेर चुनावमा जाने भयौं। तर, चुनावी अभियान आ– आफ्नै ढंगले हाक्दै थियौं। तत्कालीन नेकपा एमाले निकै आ,क्रामक ढंगले प्रचार प्रसारमा अघि बढ्यो। आफ्ना सबै जसो मुख्य नेताहरूको भिडिओ बनायो।
मुख्य दैनिक र अनलाइन पत्रिकामा विज्ञापन छाप्यो। फिल्म हलमा केपी ओली राखेर विज्ञापन बजायो। हल्ला–खल्ला गर्‍यो। तर, हामीले त्यस्तो केही गर्न सकेनौं। त्यो गर्न न त हामीसँग टीम नै थियो। न त कसैले बतायो। पछि तात्कालीन एमालेकै एक जना साथीले प्रचण्डको फोटो राखेर विज्ञापन डिजाइन गरिदिनु भयो। हामीले त्यही छाप्यौं।”
प्रचण्डले के कुरा राम्ररी बुझेका छन् भने नेकपाभित्र सबैभन्दा राम्रो र सक्षम टीम प्रधानमन्त्री ओलीसँगै छ। कुरा बुझ्ने र खट्ने टीम। ‘यस्तो टीमले सञ्चालन गरेको सरकारको त पर्फरमेन्सको बारेमा यति धेरै टिका–टिप्पणी भएको छ भने, भोलि मैले कसरी सरकार संचालन गरौँला ?’
प्रचण्डको आवेश र उ,त्तेजना घटाउन यो प्रश्न निकै सहायक बनेको उनीनिकट एक मन्त्री बताउँछन्। देशलाई का,रोनाले आ,क्रान्त पारेको छ। आर्थिक स्थिति चौपट हुने ख,तरा बढ्दै छ। रेमिट्यान्स घट्दो छ। बेरोजगारी बढ्दो। यो बेलामा सरकारको आ,लोचना गर्नु एउटा कुरा होला। तर, सरकारै चलाउन गा,ह्रो छ भन्ने उनले राम्ररी बुझेका छन्।
त्यसमाथि चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्ने, नाकाब,न्दी झेल्ने र अ,तिक्रमित भूमि समेटेर नक्शा सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्री हटाएर भारतीय मिडियाको वाहवाही लिन सकिएला, तर नेपाली नागरिकबाट भारतपरस्तको बिल्ला भिर्नुपर्ने जो,खिम छ। राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा जो,खिम मोल्नुभन्दा प्रचण्डले सायद मिल्न उचित ठाने। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले म रहेसम्म पार्टी फुट्दैन भनेको भोलिपल्ट चितवनमा पुगेर प्रचण्डले भने, ‘हतार गरेको भए दु,र्घटनामा परिन्थ्यो।
Previous वि पदमा परेकाको उ द्धार, रा हत र पुनस्र्थापन प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन…हेर्नुहोस।
Next What The Flop का’र्यक्रम ब’न्द गर्न र सन्दिप क्षेत्रीलाई का’रबाहीको माग गर्दै उ’जुरी दर्ता,,,हेर्नुहोस्।